TTSweet: မုန့်ကြာစေ့ ...
Posted by T T Sweet at 2:03 AM
Labels: (၂ ၀၀) မြန်မာ မုန့်သရေစာများ***, (၂- ၄) မုန့်ကြာစေ့
khin oo may October 17, 2010 at 4:39 AM
ပြရတာက သူများ. စားရတာက သူ. ဟွန်း
khin oo may October 17, 2010 at 4:40 AM
Moe Cho Thinn October 17, 2010 at 5:42 AM
မုန့်ကြာစေ့ မကြိုက်တဲ့သူတောင် အုန်းခြစ်ဖွေးဖွေးလေးနဲ့ဆိုတော့ စားချင်သွားတယ်။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း October 17, 2010 at 6:58 AM
Heartmuseum October 17, 2010 at 9:26 AM
စားချင်ထှာ.... ခက်တာက ဒီမှာ ဝယ်လို့ရတဲ့ ထန်းလျှက်က မြန်မာပြည်ကလို မမွှေးဘူးဗျ.... သူတို့က အနံ့သတ် ထားတာဆိုတော့ အချို အရသာပဲ ရှိပြီး အနံ့အရသာ မရှိဘူးဗျ။ စိတ်လေတယ်....
khin oo may October 17, 2010 at 10:50 AM
Sandakuu October 17, 2010 at 11:11 AM
အိမ်မှာလည်း မုန့်ကြာစေ့ လုပ်စားကြတယ်။ အိမ်ကိုတောင် လွမ်းသွားတယ်..။ ရော်ပေး...
မဆွိ..ချင်ကာပူ လာဖြစ်ဘူး။ ဟိုရက်က သက်သက် နောက်သွားတာပါး))
ကိုပေါ October 17, 2010 at 12:12 PM
.....သူ့ခင်မြာ စာမကြည့်ပဲ မုန့်ကြာစေ့လုံးရဖို့အရေး မျက်နှာချိုသွေးနေရတာ ... ....
သဘောကျသဗျာ။ အိမ်က သမီးလည်း ထိုနည်း၎င်း ပါပဲ။ ခေတ်ပြိုင်တွေပေါ့။
သက်ဝေ October 17, 2010 at 2:02 PM
ဟင်း... ထင်တယ်... ထင်တယ်... ထင်နေပါတယ်...
စိတ်တွေ ဆိုးမနေတော့ပါဘူးလေ... ကိုယ်လဲ မျက်နှာချို ပြန်သွေးလိုက်ပါရစေ... နောက်တခါ လုပ်စားရင်သာ ခေါ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့...း)))
:P October 17, 2010 at 5:22 PM
ညီမတို့ ငယ်ငယ်ကလည်း မုန့်ကြာစေ့လုပ်ရင် ကိုကိုက လူရုပ် ၊နွားရုပ်လေးတွေ လုပ်ပြီး ထည့်ပြုတ်ပေးတယ်...၊ အဲ့အရုပ်လေးတွေက အလုံးလေးတွေလောက်တော့ စားမကောင်းဘူး..။
ရွှေဘ၇ူနိူင်း October 17, 2010 at 6:06 PM
October 17, 2010 8:50 AM
တီတီဆွိ တို့ ကတော့ စောစောစီးစီး သားရေယိုအောင်လုပ်ပြန်ပြီ မုန့်ကြာစေလေးက စားလို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်
မြစ်ကျိုးအင်း October 17, 2010 at 8:38 PM
ထညက်ရေလေးဆမ်းပြီး အုန်းသီးမှုန့်လေး ဖြူးထားတာ တွေ့တော့ တကယ်ကို စားချင်သွားတယ်။
Anonymous October 18, 2010 at 12:04 AM
လမ်း ၅၀ အလယ်ဘလောက်ဖက်မှာ ညနေ ၃နာရီကျော်လောက်ဆိုရင်အဲဒီမုန့်မျိူးလာရောင်းတယ်.
T T Sweet October 18, 2010 at 10:04 AM
အစ်မကွန်းရေ ... ဟုတ်သားနော ... အစ်မပို့စ်ကို လင့်ခ်လေးပါ ချိတ်ပေးထားတယ်။ ဂျူလိုင်ကတည်းကပို့်စ်။ အဲဒီကတည်းက စားချင်နေတာ။
အစ်မအိမ်မှာ လုပ်စားကြည့်။ လွယ်လွယ်လေးနော်။
ကိုကြီးကျောက် ... ဟုတ်တယ်။ သူကမုန့်လုံးရေပေါ်နဲ့ ပြောင်းပြန်ဗျ။ ဟိုက ထန်းလျှက်က အထဲက။ သူက အပြင်က။
လသာရေ ... စလုံးလာမယ်ဆိုတာ အဟုတ်မှတ်လို့ ... သူလဲ ငပြောင်ပဲ ...း)))
ကိုပေါ၊ ကိုဘရူနိူင်း ... ခေတ်ပြိုင်များဆိုတော့ ပြုံးမိသွားတယ်။ အိမ်နားမှာလဲ ဦးခြိ်မ့် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ သမီးတွေ -ခေတ်ပြိုင်တွေ အများကြီးပဲ ... သူတို့ generation ကို စလုံးဒုတိယ မျိုးဆက်လို့ပြောလို့ရမယ်။ ဦးခြိမ့်ကတော့ 3rd generation တဲ့။
အန်တီသက်ဝေ ... အိမ်နဲနဲဝေးနေလို့ကွာ ... နောက်မှို့ အိမ်လာပို့ပါတယ် ...
ကတောက် ...း))
မြတ်နိူးရေ ... လုပ်ရတာ အရမ်းလွယ်တယ်။ ခုဆိုဂျူဂျူကကြိုက်လို့ ခဏခဏ လုပ်ပေးနေရတယ်။ ထန်းလျှက်ရည်တည်ထားတုံး မုန့်လေးစပ်ပြီး နယ်ထား။ ထန်းလျှက်ရေပွက်တော့ လုံးရင်း ပစ်ထည့်။ သိပ်မြန်တာပဲ။ လုပ်စားကြည့်နော်။
အော်မေ့နေလို့။ မုန့်နယ်တဲ့အထဲ ရေအစား အုန်းနိူ့လေး ထည့်နယ်၊ ပိုမွှေးပြီး ပိုကောင်းတယ်။ အပေါ်မှာ ဖြည့်ရေးထားပါတယ်။
လာလည်ကြသူများ၊ လာမန့်ကြသူများ အားပေးကြသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Cameron October 18, 2010 at 2:08 PM
တီတီဆွိရဲ့ မုန့်ကြာစေ့လေး စားသွား၏ ကောင်းမှကောင်း...
susu October 18, 2010 at 4:30 PM
ဖိုးတုတ် October 19, 2010 at 1:26 AM
ကျွန်တော့်မှာလည်းမစားရတာကြာလို.ထင်ပါရဲ့ ၊ မုန်.လုံးရေပေါ်မှတ်နေတာ ၊ ကိုယ်လည်း အဲဒီ့လောက်လုပ်တတ်မှာ မဟုတ်ပါဖူးလေဆိုပြီး လုပ်ပုံလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်တောင် မဖတ်တော့ပဲ စားချင်စဖွယ်ပုံတွေပဲ ကြည့်သွားတာ ၊ ခုမှ ခေါင်းစဉ်ကို သေသေချာချာ ဖြစ်ဖတ်လိုက်တော့မှ မုန်.ကြာစေ့တဲ့ ကောင်းရော...